Maalinta: Noofambar 8, 2018
Isaga oo ka hadlayey furitaanka Shirweynayaasha Gaadiidka Istanbul iyo Fair TRANSIST 2018, Madaxweynaha IMM Mevlüt Uysal wuxuu yiri, uz Waxaan xallinaynaa dhibaatada gaadiidka ee Istanbul ma ahan oo keliya sidii IMM, laakiin annaga oo kaashanayna dhammaan xarumaha dowladdeena. dowladda [More ...]
Ankara Maqnaanshaha Diiwaangelinta Tirada Rakaabka
Magaalada Ankara, diiwaangelinta gaadiid ee safarka tareenka waa la jebiyey. Markii ugu horreysay bishii Oktoobar, tirada rakaabka isticmaalaya metro-ka hab ay ku raacaan gaadiidka dadweynaha waxay ka badan yihiin 10 milyan oo biyo-xireen. Degdeg ah, muwaadiniin deggan oo deggan oo ku sugan Ankara [More ...]
Gaadiidka Dawladda Hoose ee Antalya Tababar loogu talagalay shaqaalaha darawallada ee ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha ayaa sii socda. Isku soo wada duuboo, tabobarida dareenka waxaa lagu bixiyay baaxadda tababarada Caafimaadka iyo Badbaadada Shaqada oo ay ka qeybgaleen wadayaasha 550. gaadiidka [More ...]
RayHaber 08.11.2018 Warbixinta Shirka
Mashruuca Cod Bixinta ee Çamlıbel Qaybta Mashruuca Adeegga Talo-bixinta dhismaha ayaa la qaadi doonaa Shaqaalaha iyo Adeegga Ijaarka Guryaha la Qaadi doono Adeegga Nadiifinta iyo Diliqriyeynta la Qaadi doono Ankara [More ...]
Turkey waaxda gaadiidka iyo saadka ka mid ah ururka ugu weyn ee xirfadeed ee Guddoomiyaha Association Bixiyayaasha Adeegga Logistics Gaadiidka International iyo Emre Eldener http://www.yesillojistikciler.com’dan Wuxuu u sheegay Şenel Özdemir dhibaatooyinka waaweyn ee qaybta. Madaxweynaha UTİKAD [More ...]
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada ee Gobolka (DHMI), 2018 October airway airlines, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka ayaa shaaca ka qaaday. Marka loo eego, bishii Oktoobar ee 2018; Gaadiidka diyaaradda ee tagaya iyo ka soo degaya garoonka diyaaradaha [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Manisa, Isbitaalka Magaalada Manisa wuxuu bilaabay inuu aqbalo bukaanka adeegga gaadiidka dadweynaha ee ku sugan bartamaha magaalada ayaa sameeyay qaban qaabooyin. Isagoo sheegay in muwaadiniintu si fudud ay ugu gaari karaan Isbitaalka Magaalada Manisa gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Gaadiidka lagaga hadlo Karamürsel
Duqa Magaalada Karamürsel İsmail Yıldırım iyo Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose Kocaeli Alaeddin Alkaç waxay cadeeyeen in barnaamijyada Konuş Spe to Speech ”ay ka mid yihiin gaadiidka, kaabayaasha degmada, gaar ahaan Mashruuca Isweydaarsiga Kent Square Bridge. [More ...]
Gaadiidka joogtada ah ee abaalmarinta "iyo" Taariikhda Izmir "ee magaalada caasimadda ah ee Izmir
Dowlada hoose ee Izmir Metropolitan, oo ku guuleysatay labo abaalmarin oo kala ah Sign of the City tartamada oo ay ka mid yihiin “Gaadiidka Joojinta” iyo “Historyzmir Taariikh”, sidoo kale waxay ahayd dowlada hoose ee heshay abaalmarinada ugu badan tartanka. Izmir [More ...]
Hüseyin Çavdar, oo ku nool Kahramanmaraş oo caruurnimadiisii ​​ku qaatay wadada tareenka, wuxuu shaqeeyaa habeen iyo maalinba isagoon wax allabari u gelin roobka iyo dhoobada. Hadafkeedu waa in la hubiyo badbaadada tareennada… 32 sano oo shaqaalaha tareenka Hüseyin Çavdar tareenka [More ...]
Turkey ayaa Sivas xnumx'ünc Ski Jilidda Center ee Progress
Guddoomiyaha Sivas Salih Ayhan, ayaa ku dhowaaday dhamaadka dhismayaasha is-qurxinta ee ski ee dhismaha la helay. Ayhan, Sivas State Tiyaatarka waddada Turgut Ozal ee dhismaha ka socda Turkey ee dhismaha ugu horeysay ka jilidda ski ah [More ...]
Golaha cusub ee Agaasimayaasha ee 4 ayaa qabtay kulankiisii ​​ugu horreeyay iyaga oo oggolaanaya Agaasinka Gobollada Ururada. 9 ee xarunta YOLDER November Noofambar 3 Sabtida [More ...]
Hal sano oo ah gaadiidka dadweynaha
Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa Tuna, tan iyo maalintii ugu horreysay ee uu xafiiska la wareego isaga oo ka wakiil ah gargaarka laga gaarayo go'aannada dib-u-habeeynta ee lagu fuliyay magaca tirooyinka la soo bandhigay. Ku toosinta muwaadiniinta gaadiidka dadweynaha ee caasimada [More ...]
Sincan OSB-Torekent-Kizilay, Cayyolu-Kizilay iyo Khadadka Kecioren-AKM, Ankara, Ankara, oo bixiya adeegyo gaadiid dadweyne bisha Oktoobar 10 milyan 46 kun oo 925 rakaab ah oo la adeegsaday. Saraakiisha EGO ayaa markii ugu horreysay dhagax-dhigay 10 million Dam [More ...]